Wararkii ugu dambeeyay Qarax lala beegsaday Ciidamo ka tirsan Dowladda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax ismiidaamin ah oo lala eegtay Injineerada Turkiga ee dhismaha ka wada wadada Muqdisho iyo Afgooye ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa deegaannada Xaawo Cabdi iyo Lafoole ee duleedka Magaalada muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay ku warameen in Ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa ay Ciidamada toogteen, markii uu ku dhawaaday Goob ay ku sugnaayeen Injineerada Turkiga iyo Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, sidaasina uu ku qarxay.
Wararka hordhac ah ee la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in qaraxa uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan Ciidamada Dowladda halka mid kamid ah Injineerada Turkiga uu ku dhaawacmay.
Dhismaha laamiga isku xira Muqdisho iyo Afgooye ayaa haatan maraya halka loo yaqaan Soos, oo u dhaxeeyso Lafoole iyo Xaawo Cabdi, waxaana amaanka waddada sugaya Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ayaa gebi ahaan xiray wadada, isla markaana waxaa xiligaan kahad ku jira isku socodka gaadiid iyo dadweynaha, iyadoo aad loo adkeeyay amniga wadada.